UEFA Oo Ka Hadashay Sababta Manchester United Iyo Arsenal Looga Wareejiyey Martigelinta Lugta 2aad Ee Champions League Iyo Europa League | Hohad News
March 16, 2019 - Written by Hohad Office
Manchester United iyo Arsenal ayaa waayey fursad ay garoomadooda kusoo dhoweyn lahaayeen Barcelona iyo Napoli kaddib markii lasoo saaray isku aadka tartamada Champions League iyo Europa League.
Man United iyo Arsenal ayay ahayd inay lugta hore bannaanka u baxaan oo ay lugta labaadna garoomadooda ku qaabilaan kooxaha ay isku beegmeen, taas oo isku aadkuna uu u muujiyey, hase yeeshee UEFA ayaa ka xayuubisay fursaddaas oo ka diiday.
UEFA ayaa ku wargelisay Manchester United iyo Arsenal in kulamada labaad ay marti noqon doonaan maadaama ay kooxaha Manchester City iyo Chelsea kusoo baxeen martigelinta lugta labaad.
Manchester City ayaa ciyaarta hore u bixi doonta magaalada London oo ay kula soo ciyaari doonto Tottenham, kulanka xigana garoonka Etihad ayay ku qaabili doontaa Spurs, sidaas oo kalena Chelsea ayaa ciyaarta hore u tegi doonta Slavia Prague, kulanka labaadna magaalada London ku qaabili doonta.
UEFA oo ka duulaysa labadan kooxood ee Ingiriiska ee magaalooyinka Manchester Iyo London ka dhisan ee kulamada labaad martigelinta ku qoran ee City iyo Chelsea, waxay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in magaalooyinkaasi aanay qaabili karin kooxo kale oo dheeraad ah, sidaas daraadeedna Man United iyo Arsenal ay marti u noqon doonaan Barcelona iyo Napoli.
“Manchester City iyo Manchester United ma awoodi doonaan inay isku hal habeen guryahooda ku ciyaaraan amaba habeeno isku xiga, anaga oo ka duulayna go’aanka maamulka gudaha (Ingiriiska)” Sidaas waxa lagu yidhi bayaan kasoo baxay xarunta UEFA.